Hurdaysan Bright ku dhaw - Asunto - Dresden
Hurdaysan Bright ku dhaw
Stübelallee, 01309 Dresden, Saksa
Our guriga waa ku weyn Jannada, meesha madadaalada dhaw ka. Xaruntu waxay magaalada taariikhiga ah gaadiidka dadweynaha waxaa lagu gaari karaa 8 daqiiqo gudahood. Guriga waxay leedahay 4 guri oo kala duwan, kuwaas oo raaxo leh oo raaxo leh. Apartment 3 (2 qof) oo ku yaalla sofiitada ee 32m2 ee size oo uu leeyahay qoolad weyn oo la jikada iyo musqusha oo kala duwan oo gaar ah la qubeyska iyo musqusha. Inta badan oo ka mid ah indhaha ku taariikhi caanka ah ee dhaw ku yaalaan Altstadt ah (Old degmada Town). Waxaa aad ka arki kartaa Frauenkirche, Opera Semper ah, Zwinger ah, Alte Gemäldegalerie ka Meister ("Old Masters Picture Gallery") iyo Palace Royal ah ("Residential Palace ') la khasnadda boqorradii Saxon, caanka Green yiri- (ka heli Green yiri-). The beerta waaweyn park dhow yahay sidoo booqo. Iyadoo steamers taki taariikhi ah Steamship Saxon ah, waxaad sahamin kartaa Valley Elbe ah. Waxaa kale oo haboon si ay u helaan magaalooyinka geysto Meissen iyo Radebeul oo doonnida. kheyraad, waxaa jira ee Saxon Switzerland iyo Königstein qalcaddiisa. wadooyinka kale ee hakaga waa bushkuleeti Jid baaskiil Elberadweg ah. Booqashada qalcadahaba on Elbe ayaa waxaa sidoo kale lagu talinayaa.
Canshuurta ku hoydo ee dhaw caasimada gobolka ee aan lagu daraa sicirka. Qiimaha xayawaanka waa 4,00 € halkii habeen.
Suuri huoneisto puutarha
Iso, kodikas Loft Apartment